शिक्षक दरबन्दीविनाका विद्यालय – Sajha Bisaunee
शिक्षक दरबन्दीविनाका विद्यालय
। २४ पुष २०७४, सोमबार १५:२४ मा प्रकाशित
कालिकोट, २३ पुस ।
नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा रहेको रूपादेवी आधारभूत विद्यालयमा पाँच जना शिक्षक कार्यरत छन् । तर ती पाँचै जना शिक्षक नीजि स्रोतबाट राखिएका हुन् । अझ अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने, वि.सं. २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नै छैन । शिक्षक दरबन्दी विना नै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
शिक्षक दरबन्दी विना नै सञ्चालन भइरहेको यो एउटा मात्रै विद्यालय भने होइन । कालिकोट जिल्लाभरमा आठ दर्जनभन्दा बढी यस्ता विद्यालय छन्, जहाँ शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । यहाँका ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी शून्य छ । वि.सं. २०६२ सालबाट स्थापना भएको रूपादेवी आधारभूत विद्यालयले कक्षा पाँचसम्म अध्यापन गर्न सक्ने अनुमति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाएको छ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकको दरबन्दी भने विद्यालयलाई अहिलेसम्म दिएको छैन । जसले गर्दा नीति स्रोतबाट राखिएको अस्थायी शिक्षकको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
विद्यालयमा अहिले पाँच जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ती पाँच जना शिक्षक दरबन्दी विना नै निजी स्रोतबाट राखिएका हुन् । ‘सरकारले विद्यालयलाई कुनै दरबन्दी नदिएपछि निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भैरबहादुर शाहीले भने । उनले सरकारले विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरे पनि दरबन्दी नदिँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताए । जिल्लाका ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयले नै रूपादेवीले जस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । ‘विद्यार्थीको संख्या अनुसार शिक्षक राख्नैपर्छ’ शाहीले भने, ‘आवश्यक शिक्षक राख्दा स्रोत अपुग हुन्छ, उनीहरूलाई तलब कसरी पु¥याउने भन्ने अर्को समस्या आइलाग्छ ।’ समुदायमा विद्यालय अपरिहार्य भए पनि सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनले जनाए ।
अभिभावकहरू जसोतसो आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउन तयार भए पनि विद्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको रूपादेवी विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिन्तन नेपालीले बताए । एक सय ५१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत पाँच जना शिक्षकलाई तलवको जोहो गर्नै हम्मेहम्मे हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
निजी स्रोतका शिक्षकबाट सञ्चालन गरिएको विद्यालय भएका कारणले शिक्षकहरूलाई शिक्षा कार्यालयबाट दिइने केही अनुदानले तलब खुवाउन नै ग्राहो भएको नेपालीले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भैरबहादुर शाही भन्छन्, ‘गाउँमा विद्यालय नभइ भएको छैन, शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि ग्राहो भइरहेको छ । शिक्षा कार्यालय दिने केही अनुदानले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’
यसरी दरबन्दी विना जिल्लामा ९९ वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । ती विद्यालयहरूमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीको दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम कटाएर तथा स्थानीय तहबाट केही बजेट छुटाएर पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको रूपादेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेपालीले बताए । ‘विद्यालयमा दरबन्दीको एक जना पनि शिक्षक छैनन्’ उनले भने, ‘दिवा खाजा, छात्रवृत्ति र स्थानीय तहबाट केही बजेट छुटाएर पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उस्तै रहेको नेपाली बताउँछन् ।
विद्यालयका लागि आवश्यक मापदण्डमा सबै
पूर्वाधार भए पनि शिक्षक भने अपुग छन् । विद्यार्थी संख्या र उनीहरूको नतिजा राम्रो भए पनि सरकारी निकायबाट शिक्षकको दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीय अभिभावकहरूको भनाइ छ । केन्द्रबाट धेरैपटक शिक्षक दरबन्दी दिने आश्वासन पाए पनि कालिकोटका ९९ विद्यालयले वर्षौंसम्म शिक्षकको राहत कोटासमेत नपाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । ‘राहतदेखि कुनै पनि दरबन्दी छैन,’ उनले भने, ‘चार वर्षदेखि मागेको दरबन्दीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।’
(क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागि)